Angolà: Ankizy maro ampangaina ho manao famosaviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2018 17:22 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
(Fanamarihana : Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2008)
Nivadi-po tamin'ny tantara mahatsiravina vao haingana momba ny zaza ariana, tsy karakaraina tsara, ampijaliana ary vonoina satria ampangaina ho manao famosaviana i Angolà. Tao amin'ny monisipalin'i Sambizanga, faritr'i Luanda no nitrangan'ny iray tamin'ny ireo tranga vao haingana. Araka ny gazety iray any an-toerana, zaza aman-polony maro nohidiana tao anaty efitra nampirehetana afo mba handorana jindungo (karazana sakay) no novonjen'ny polisim-pirenena. Mety ho very tanana ny iray amin'izy ireo, tratran'ny halemena taoriana ratra maro vokatry ny lelan-javamaranitra. Mihevitra ireo nahavanona izany fampijaliana izany hoe manala ny ratsy ao amin'ny vatan'ireo zaza voagejan'ny demony ireo fomba ireo.
Malaza eo anivon'ireo mpikambana ao amin'ny sekta sasany ireo fomba ireo [amin'ny teny anglisy], izay ny ankamaroany, tsy ara-dalàna avokoa. Noho ny fivavahana, haratsian-tsaina, tsy fahaizana, na noho ny faniriana hanafoana ny vava mila vokisana tsotra izao, tomponandraikitra voalohany amin'ireo fihetsika ireo ny mpikambana ao anatin'ny fianakaviana. Amin'ny finoana ny famosaviana, miampanga ireo zanany, zanaka lahin'ny anadahy/anabaviny sy ny zana-bady amin'ny fijaliana mahaketraka izy ireo vantany vao misy zavatra tsy manjary ao an-tokantranony.
Manabaribary ny iray amin'ireo tranga mampalahelo ireo ny blaogy Angola Saudades [amin'ny teny paortiogey]:
”Iray tamin'ireo tafavoaka velona tamina tranga iray mahalasa saina nandritra izay taona maro izay tao Angolà i Makiesse : arahina fampijaliana, fanariana ary famonoana mihitsy aza ny fiampangana ny ankizy ho manao famosaviana. Niampanga azy ho namosavy ary namono ny rain'ny reniny ny renikelin'i Makiesse. Tsy nahazo niara-nisakafo tamin'ny fianakaviany intsony izy, tsy maintsy natory tany an-gabone, ary voadaroka isanandro sy noterena hiforitra hanaiky ireo fombafomba fanadiovana toa mitovy amin'ny fampijaliana – fifadiankanina, daroka ary fanagadràna. Enina taona i Makiesse tamin'izany. «Nilaza aho fa tsy mpamosavy, hoe mety nisy naka ny endriko ny mpamosavy iray nandritra ny alina. Fa tsy nisy nino ahy », hoy i Makiesse tamin'ny PlusNews. Indray andro, nofafazan'ny fianskaviany lasantsy izy. Niaro azy tsy ho faty ny dadatoany. Navoakany an-tsokosoko tao amin'ilay Uige ary nentina nankany Luanda renivohitra, any amin'ny 345km. Napetrany tao amina fiangonana katôlika mandray ireo ankizy mirenireny. Telo taona izay. Nanomboka hatreo, ny zokiny lahimatoa no mba nitsidika azy in-droa monja .”
Taona vitsy lasa izay, navoaka ho fantatry ny rehetra ny fanadihadiana nataon'ny Ivontoerana Nasionaly ho an'ny Ankizy (INAC) momba ny fiantraikan'ny fomba atao amin'ny ankizy toy izao, manolona any resaka zon'olombelona. Manambara ilay fanadihadiana fa lasa nalaza tany amin'ny faran'ny taona 90 tany ity fiampangana mahazo ny ankizy ity, ary io, tsy misy fifandraisana manokana amin'ireo fomba nentim-paharazana ao an-toerana. Araka ilay fandinihana, mifamatotra amin'ireo fiovana nitranga tao amin'ny firafitry ny fianakaviana sy ny dikan'ny rohim-pihavanana, sy ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka, izay midika fikarakarana ny zanany ny fitrangan'ireo fihetsika ireo.
Ao Angolà, heverina ho toy ny mitombina ireo fiampangana famosaviana sy ireo fampijaliana ny zaza, izay mampihena eo imason'ny fiarahamonina ny mahaloza ireny hetsika ataon'ny fianakaviana ireny. Aorian'ny niampangana azy, matetika no tsy tafiditra ho isan'ny fianakaviana ireny ankizy ireny, noho ny fanilikilihana sy fanavakavahana aterak'ireo fiampangana ireo. Mitondra antsika ho amin'ny olana iray hafa izany : ny fitomboan'ny isan'ny zaza mirenireny eny an-dalambe. Tsy mahazo aina amin'ireo fijery mpiampanga ataon'ny fianakaviany sy ny mpifanolobodirindrina aminy, aleon'izy ireo miaina irery eny amin'ny làlan'ity firenena ity.
Nampiako tranga iray hafa ny blaogy Noticias Cristas [amin'ny teny paortiogey]:
”Ankizy miisa roa ambin'ny folo nampaingana ho nanao famosaviana no nalain'ny Maseran'ny Kaongregasionan'ny Bon Pasteur tany amin'ny lalan'i Luanda. Tohina tamin'ny tantarana notantarain'ireo ankizy nipetraka teny an-dalamben'ny renivohitra ireo relijiozy ireo, izay nanapa-kevitra ny hanampy ireto farany hanomboka fiainana vaovao indray. Ny ohatra vao haingana indrindra dia ny an'ny zazavavy kely 11 taona, nampangaina ho namono ny reniny tamin'ny famosaviana azy. Mitantara ny tantarany ny reny lehibe ao amin'ny Kaongregasiona : « Navelan'ny rainy teny an-dalana izy, ary, nosamborin'ny polisy rangahy io satria nidaroka azy tamin'izany fotoana izany. Nilaza izy fa 11 taona ny zanany vavy ary mpamosavy. Nanampy izy fa nohaniny ny reniny, nahazo ody kongoley ary mety hitrangan'ny zavatra mitovy amin'izany koa izy, izay no antony nanapahany hevitra hanary ilay zazavavy. Olona iray nahita azy nitomany teny an-dalana no nitondra ilay zaza nankany amin'ny Masera tao Palanca. Nankany amin'ny trano nipetrahan'ilay fianakaviana aho ary nihaona tamin'ny olona vitsivitsy akaiky azy , fa samy nanamarina tamiko avokoa izy rehetra fa mpamosavy ilay sipakely. Niresaka tamin'izy ireo aho, niezaka ny handresy lahatra azy ireo fa tsy nisy fomba mihitsy ary niteny amiko ry zareo fa tsy tokony avela miaraka amin'izy ireo ilay sipakely satria mpamosavy no hitany ao aminy.”
Nanomboka fanentanana sy fampitandremana mba hisorohana ireny fampijaliana ny ankizy ireny ny fanjakana sy ireo fikambanan'olontsotra. Fomba roa lehibe hafa noraisin'ireo manampahefana ny tetikasa toy ny fametrahana toby fandraisana sy ny fandraisana andraikitra araka ny lalàna raha toa ka sendra ny hetsika fampijaliana toy izany.
Raha manam-bintana, hiova tanteraka ny zava-misy. Ndeha isika hino fa afaka ny hisitraka am-pilaminana ny fahazazany tsy ho very fanantenana amina fiainana tsaratsara kokoa ireo ankizy ao Angolà. Raha manam-bintana, hiady mafy ho an'ireo [ankizy ireo] ny fiarahamonina angoley, izay efa niampita ny sisintanin'ny firenena. Ndeha isika hino fa ho heverina ho toy ny tomponandraikitra ary ho tsaraina ireo ray aman-dreny sy fianakavian'ireo niharan'ny fampijaliana ireo, mba handresena lahatra ireo hsfs mpanao fanararaotana.